Nyanzvi yePurasitiki Mabhodhoro Mugadziri | Fukang
Kubva 1999, nyanzvi muKugadzira marudzi ese emagaba
HDPE PLUPTION BODTLE
Isu tiri nyanzvi mukugadzira uye kutumira kunze marudzi akasiyana ePET uye HDPE mabhodhoro. ayo anonyanya kushandiswa kuchitoro chemishonga uye maindasitiri ezvekudya, zvinhu zvese zviri giredhi rekudya uye zvakapfuura FDA, EU, LFGB certification,
Fukung Plastiki Chikafu Jar Nut Chocolate Cookie Mudziyo
NUT MabhodhoroMudziyo wepurasitiki wezvinonhuwiraMapurasitiki anotapiraKuongorora kwekugadzira kwemabhodhoro uye mapepa akasiyana, iyo peth bhodhoro rinoda kuburitsa embryo kutanga, shandisa tekinoroji yekuvhuvhuta kuti igadzire mabhodhoro, iyo cap ndeye nhanho imwe chete inje.
Fuakang Condiment Bottle Kuzivisa Midziyo Munyu wePechi grinder
Fukung Pet Health Care Bottle Medicle Media Bottle Pharkle Pharktle Sportical Shandisa mudziyo
PET Health Care Bottlepharmaceutical bottle vagadzirimapurasitiki ekupururudza mbiyaInzwa wakasununguka kutibata nesu!Isu tiri fukang epurasitiki zvigadzirwa co., Ltd, isu takasara muna 2006 uye isu tine zvakawanda zvekutengesa chiitiko, tinogona kukubatsira zvese nezvekununura kubva kuChina, isu tine fekitori yedu, uye isu tinogona kuburitsa zvidimbu zvegumi nemashanu.
Kuongorora kwekugadzira kwemabhodhoro uye mapepa akasiyana, iyo peth bhodhoro rinoda kuburitsa embryo kutanga, shandisa tekinoroji yekuvhuvhuta kuti igadzire mabhodhoro, iyo cap ndeye nhanho imwe chete inje.Inzwa wakasununguka kutibata nesu!
(1) Tsika ruvara: Tinogona kugadzira chero ruvara rwemabhodhoro epurasitiki zvinoenderana nenhamba yako yerudzi rwepantone.
(2) Tsika dhizaini: Kana iwe uine yako dhizaini, kugamuchirwa kutumira dhizaini yako kana sampuli kwatiri, tinogona kuita sekuenderana nezvikumbiro zvako.
(3) Tsika logo/label: Yako logo inogona kuiswa pane zvigadzirwa zvako nekutsikisa chidhindo, sirika screen kudhinda, embossing, UV coating, sticker kana shrink firimu.
(4) Sample yemahara: Tinogona kupa mabhodhoro emahara kuti iwe uedze mhando.
Fukung Fright Usati Yakatumirwa Yakakura Yakakura Kutakura Kutakura
Fuekang isu isu neyedu vatengi musangano muhupenyu chaihwo
Iyo inonyanya kushandiswa kweMishonga uye Chikafu cheindasitiri, zvese zvigadzirwa zvechikafu zvinokwana .
Dongguan Fukang Purasitiki Zvigadzirwa C., LTD. Yakatangwa muna 2009, iri muDongguan City, Guangdong, China uye yakafukidza 9000 mativi metres.Nemushandi anoshanda makumi masere nemasimba, makumi maviri nemashanu anoisa michina uye anovhuvhuta michina. Isu takasarudzika mukugadzira uye kutumira kunze kwemhando dzakasiyana dzepfu peturu uye hdpe mabhodhoro. Izvo zvinonyanya kushandiswa zve pharmasave uye neyunivhesiti yekudya, kambani yedu yadarika GB / T1900001: 2015, LFGB Australia, Brazil, Canada, United States, India, Mexico, Capsules, mapiritsi uye mahwendefa, etc.piritsi ekudya chikafu anoshandiswa Nekuti zvine marudzi akasiyana ezvekudya, akadai sepipi, makuki, chokoreti, nzungu, zvipfeve zvekudya, zvakadai sekurongedza ratidziro, t-shirt, matoyi, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, zvipo, Zvishongo, zvigadzirwa zvemagetsi uye zvigadzirwa zvemagetsi tinopawo basa reOEM, sekugadzira mitsva mitsva uye yekudhinda logo seMutengi Wemwoyo wose iwe kuti ubatsire pamwe chete nesu.
21 makore ekutarisa pamabhodhoro epurasitiki
Dongguan Fukang Plastic Products Co., Ltd yakavambwa muna 1999, iri muGuangdong, China uye yakafukidza 9000 square metres. Isu tiri nyanzvi mukugadzira uye kutumira kunze marudzi akasiyana ePET uye HDPE mabhodhoro. izvo zvinonyanya kushandiswa kumishonga yemishonga uye maindasitiri ezvekudya, zvinhu zvese giredhi rekudya uye zvakapfuura FDA, EU, LFGB zvitupa, uye zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvikuru muAustralia, Brazil, Canada, United States, India, Newsland, Mexico, Philippine etc. ...